Articles tagged 'davis cup'
Uphill task for Davis Cup team 13 March 2015 HARARE - The Zimbabwe Davis Cup team will face another uphill task in the Euro-Africa Zone Group II play-offs when they host highly-ranked Moldova in July. Zimbabwe suffered a humiliating 4-1 home defeat at the hands of Bosnia-Herzegovina at the weekend. With that defeat, the Martin Dzuwa-c...
Wayne Black quits as Zim lose 13 March 2015 HARARE - Zimbabwe's hopes of progressing to the Davis Cup Group I went up in smoke after going down to Bosnia and Herzegovina in the doubles contest of the Euro-Africa Zone Group II tie here yesterday. The result saw Davis Cup legend Wayne Black go back into retirement after only one match sin...
Bad start for Zim 13 March 2015 HARARE - Zimbabwe's Davis Cup Euro-Africa Zone Group II tie against Bosnia and Herzegovina got off to a false start with the visitors racing into an early 2-0 lead after outclassing the hosts in the opening two matches here yesterday. Not that the European side produced anything special in thi...
Zim's Davis Cup uphill task 6 March 2015 HARARE - Zimbabwe's quest to qualify for the Davis Cup Group I gets underway this morning against a highly-rated Bosnia-Herzegovina side at Harare Sports Club. Non-playing captain Martin Dzuwa leads the local team that includes Takanyi Garanganga, Benjamin Lock, Mark Fynn, Tinotenda Chanakira ...
Bosnia and Herzegovina cautious of Zim 4 March 2015 HARARE - Zimbabwe's opponents in the 2015 Euro-Africa Zone Group II Davis Cup tie, Bosnia and Herzegovina are cautious ahead of this weekend's much-anticipated clash at Harare Sports Club. The East European team jetted into the country on Sunday and conducted their first training session at th...
Davis Cup team in Mutare 3 March 2015 MUTARE - The Zimbabwe Davis Cup team will today conduct a tennis coaching clinic for Mantas Tennis Academy during its 2014 Annual Tennis Awards at Mutare Girls High. Zimbabwe's United States-based number one player Takanyi Garanganga, Turkey-based number two Mark Finn and fourth-placed Spain-b...
$45k needed for Davis Cup tie 21 February 2015 HARARE - With two weeks left before Zimbabwe's much-anticipated Davis Cup tie against Bosnia and Herzegovina, Tennis Zimbabwe (TZ) is racing against time to raise $45 000 to host the match. Zimbabwe will play the Europeans in the 2015 Euro-Africa Zone Group II, the country's first home tie in ...
Zim continue preps for Davis Cup return? 4 February 2015 HARARE - Tennis Zimbabwe (TZ) has intensified preparations to host the much-anticipated Davis Cup tie with Bosnia and Herzegovina early next month. Zimbabwe will play the Europeans in the 2015 Euro-Africa Zone Group II, the country's first home tie in years. Home Davis Cup matches were a hi...
Garanganga receives Davis Cup special mention 13 January 2015 HARARE - Zimbabwe's number one tennis player Takanyi Garanganga is ecstatic to have received honourable mention in the 2014 Davis Cup MVP Awards. Garanganga led Zimbabwe to promotion from Africa Zone Group III, winning all three singles rubbers and the only doubles rubber he contested. That...
TZ lauds victorious Davis Cup team 15 September 2014 HARARE - Tennis Zimbabwe (TZ) has praised the country’s Davis Cup team for ending an eight-year wait to gain promotion into the Davis Cup Euro/Africa Zone Group II. A five-man Zimbabwe team, led by non-playing skipper Martin Dzuwa, on Saturday beat Namibia 2-0 in the semi-finals of the Africa ...
Zim Davis Cup team in Nigeria test 10 September 2014 HARARE - Zimbabwe Davis Cup team will be hoping to continue with their fine start when they face Nigeria in the 2014 Davis Cup Euro/Africa Zone Group III match at Smash Tennis Academy in Cairo, Egypt today. The Zimbabwe team begin their quest to qualify for 2015 Davis Cup Euro/Africa Zone Grou...